फरक कन्सेप्टमा ज्ञान सुब्बाको भिडियो भिषणको निर्देशनमा - Purbeli News
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १८, २०७८ समय: ६:०६:०८
धरान। मंगलबार धरानको पुतली लाइन स्थित वेब क्याफे एन्ड चिकेन स्टपमा एक्सन कट चलिरहेको थियो । त्यहाँ हंगकंग निवासी धराने गायक ज्ञान सुब्बाको गीत को छायाकन भैरहेको थियो ।
वेटर र ग्राहकको रूपमा कलाकारहरु अभिनय गरिरहेका थिए भने निर्देशक भीषण राईले उक्त म्युजिक भिडियोको निर्देशन गर्दै थिए । निर्देशक भीषण राईले भिडियोमा नयाँ कन्सेप्ट पस्किन लागेको बताए । उनले भने “मैले यो भिडियोमा फरक कन्सेप्ट ल्याएको छु, दर्शकलाई नयाँ लाग्न सक्छ ।”
धरान र चतराको विभिन्न स्थानमा दुई दिन लगाएर उक्त म्युजिक भिडियोको छायाकन गरिएको थियो । आखिर के को लागि होला ? बोलको उक्त म्युजिक भिडियोमा लोकप्रिय अभिनेता प्रेम सुब्बालाई मुख्य रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । भिडियोमा बादल श्रेष्ठ, र नव कलाकारहरु रबिना केसी र इसिता राईको पनि अभिनय रहेको छ । उक्त गीतमा शब्द रबिन खावाहाङ राईको रहेको छ भने संगीत डा. शरद सिन्हाको रहेको छ ।